ပန်းခြံထဲက အသီး (ဓါတ်ပုံပိုစ်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Local Guides » ပန်းခြံထဲက အသီး (ဓါတ်ပုံပိုစ်)	16
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jul 12, 2015 in Local Guides, Photography | 16 comments
မေးကြည့်တော့ ပိုးစာသီး လို့ ပြောပါတယ်။
စားရတယ်လို့သိလိုက်ပေမယ့် ဘာသီးမှန်းတော့ မသိခဲ့ရဘူး၊
မြစပဲရိုး says: ကပေါက်ကြီး “6မြေခကြွေ” တွေက နှင်းသီး ဆိုပြီး ရန်ကုန် မှာ ရောင်း တယ် လို့ ထင်တယ်။
သူငယ်ချင်း အိမ်မှာတောင် အပင်ရှိလို့ ကျွန်မတို့ ခူးစားနေကျ။
ပိုးဇာသီး ကတော့ ဒီမှာ Raspberry ဆိုတဲ့ ဘယ်ရီသီး နဲ့ ဆင်ဆင်ဘဲ။ တူတော့ မတူဘူးထင်ရဲ့။ အရွက် က သိပ်မတူလို့။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အဲဒီနေရာက နှင်းသီးပင်တွေချည်းဘဲ
ကျနော်လဲ ကောက်းစားကြည့်တယ် နည်းနည်း ဖန်သလိုဘဲ
မြစပဲရိုး says: ဟုတ်တယ် ကပေါက်ကြီး။ နဲနဲဖန် တယ်။ တော်တော်လေး ပန်းရောင်ရင့် မှ ချို တော့ တာ။
Alinsett @ Maung Thura says: နှင်းသီးတော့ ကြိုက်တယ်။ အနံ့ရော အရသာပါ… စားကောင်းတယ်ထင့်…
တစ်ခု သတိရသွားတာက… နှင်းသီး သိပ်ကြိုက်တဲ့ အိမ်မွေး အလှ ခွေးကြီးတစ်ကောင်အကြောင်း…
အရင် အလုပ်ရှင် မွေးထားတာ….
နာမည်က Rain လို့ ခေါ်ကြတာ…
ကျနော်တို့ ခြံထဲက နှင်းသီး ခူးရင်..သူက လုစားဖို့ ချောင်းနေပြီ…
ခူးပြီးသားတွေ အောက်နားမှ ပုံထားတာ…. လာလာ လုစားတာ..
သူက နှင်းသီးမှ မဟုတ်…လိမ်မော်သီး ဖရဲသီး…ကအစ…. သစ်သီးတွေ တော်တော်များများကို မြိန်ရေရှက်ရေစားတတ်တာ…
အဲ.. သကြားလုံးတောင်..ပလပ်ပလပ်နဲ့ စားသေး…
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: တိရိစ္ဆာန်ထဲမှာ ခွေးကလူနဲ့ အယဉ်ပါးဆုံး ထင်ပါတယ်
လူစားသမျှ အကုန်လိုက်စားတတ်လို့ပါ အလင်းဆက်ရေ
Mike says: .ပိုးစာသီးက အ၀ါရောင်လည်းရှိတယ်မှတ်တာပဲ..
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုမိုက်ပြောတဲ့ အ၀ါရောင်အသီးက ရှမ်းဇီးသီး လို့ ခေါ်တဲ့ အသီး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
Ma Ei says: ပိုးစာသီးတွေ နှင်းသီးတွေ ခူးမယ့်သူ မရှိကြလားမသိ
နှင်းသီးပင် စိုက်ချင်လို့ ဝေေ၀ ဆီကနေ ကိုင်းတောင်းစိုက်သေးတာ
အဖူးလေးတွေထွက်ပီးမှ သေသွားလို့ နှမျောနေတာ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မ အိ ရေ
ဒီပန်းခြံထဲမှာ အသီးတွေက အပင်ပေါ်မှာ ပြွတ်နေတာဘဲ
လမ်းဘေးမှာပေါက်နေတဲ့ ပိန္နဲသီးကတော့ နည်းနည်းကြီးတာနဲ့ မရှိတော့
အခု ရက် လမ်းဘေးအပင်မှာ သကြားသီး တွေ သီးနေပြီ
မမှည့်သေးတော့ ခူးမယ့်လူ မရှိ
လုံမလေးမွန်မွန် says: နှင်းသီးအနီက ပိုစားကောင်းတယ်… ရုံးမှာက အဖြူပင်ရှိတယ်.. ကြွေကျနေတာ နှမြောစရာကြီး…
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: လုံမလေးရေ
အဲအပင်ကို အခု မှ မြင်ဘူးတာ အနီသီးပင်တွေဖြစ်ဘို့များတယ်
sorrow says: ..ပိုးစာပင်က ပြင်ဦးလွင်မှာ အတော်များတယ်ခင်ဗျ ။ အရွက်နုလေးတွေက ပိုးချဉ်ထုတ်တဲ့ ပိုးကောင်ရဲ့ အဓိကအစားအစာ ဖြစ်နေတော့ နေရာအတော်များများမှာ စိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ ။ ပိုးစာသီးက အနီအပြင် အနက်ရောင် အသီးပါရှိတယ် ဦးဦးပေါက်ရဲ့ ။ အနက်ရောင်အသီးက ပိုချိုတယ်ခင်ဗျ ။ အသီးဖျော်စက်ထဲ နွားနို့လေးထည့်သောက်ရင် အလွန်လတ်ဆတ်တဲ့ ထူးခြားတဲ့အရသာမျိုးရှိပါကြောင်း ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: စိုင်းရေ
ပိုးစာသီးအနက်ဆိုတာ မှင်သီးလို့ခေါ်တဲ့ အသီးနဲ့တူလားမသိဘူး။
sorrow says: ဟုတ်ပါ့ ဦးဦးပေါက်ရေ .. စားပြီးရင် လျှာကအတော်ကြာအောင်မည်းနေတတ်တာမျိုး …
YE YINT HLAING says: ဦးပေါက် စတော်ဘယ်ရီပင်က နိမ့်နိမ့်လေးမလား?
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုရဲရင့်နိုင်ရေ
စတော်ဘယ်ရီသီးက မြေကပ်ပေါက်တဲ့ အပင်ပါ
ဟိုးအရင်ခေတ်က စာရေးဆရာတစ်ယောက်က ချစ်သူနှစ်ဦး စတော်ဘယ်ရီပင်အောက်မှာ
ထိုင်ပြီးစကားပြောကြတယ်လို့ ရေးဘူးလို့ ဟာသ ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်